မရှိမဖြစ် လူမှုကွန်ရက် tool (၁၀) ခု
Facebook ပေါ်မှာ အခြေစိုက်ပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ Entourage ဟာ My space ပေါ်မှာရှိတဲ့ friends ataGlance tool လိုပဲ လူကြိုက်များလှတဲ့ သူ့ရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ user အတွက် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို thumbnail သဘောမျိုး စီစဉ်ပေးထားတာကစပြီး များစွာသော ဖန်တီးနိုင်မယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရင်းနှီးမှုတွေ ဖြစ်ကြစေဖို့ နေရပ်လိပ်စာတွေကို မြေပုံ သဘောမျိုး ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ ‘freind wheel’ ဆိုတာ ကလည်း ရှိပါသေးတယ်။
2. My flickr and Happy Flickr
လူမှုကွန်ရက် တိုင်းဟာ ဓါတ်ပုံတွေကို upload တင်ဖို့ ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဓါတ်ပုံတွေဟာ နောက်ထပ်ဓါတ်ပုံ အသစ်တွေ ထပ်ပြီး upload လုပ်တာနဲ့ ဖုံးအုပ်ကုန်ပါတယ်။ Facebook အတွက် Myflick နဲ့ Myspace အတွက် happy Flickr တို့ကတော့ ဓါတ်ပုံအဟောင်းတွေရော၊ အသစ်တွေရော လယ်လင့်တကူ စီစဉ်ဖေါ်ပြပေးပါတယ်။ User အနေနဲ့ စနစ်တကျ စီစဉ်ထားလို့ ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုး စီစဉ်ထားချင်သလဲ ဆိုတာကိုပဲ ကိုယ့်ဘာသာ စီစဉ်ရတော့မှာ ဖြစ်လောက်အောင် ကောင်းမွန်တဲ့ tool တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook အတွက်ရော Myspace အတွက်ရော ဖန်တီးထားတဲ့ ilike tool ဟာ user တွေအချင်းချင်း တေးဂီတတွေ ဖလှယ်နိုင်စေပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတွေကိုလည်း အတိုချုံးပြီး အမြည်းသဘော ရရှိခံစားနိုင်တဲ့အပြင် အသစ်ထုတ်လွှင့်မယ့် သီချင်းတွေကိုလည်း အဆိုတော် အလိုက် list လုပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် ကိုယ့်အကြိုက် သီချင်းတွေ အချင်းချင်းကိုတောင် compare လုပ်လို့ ရနိုင်တဲ့ အထိ ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ilike ဟာ add-on application တွေထဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံး ပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ music tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဂီတဝါသနာရှင် user အလိုရှိတာ မှန်သမျှကို ilike ကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Graffiti ဆိုတာဟာ နံရံ၊ အုတ်တံတိုင်း၊ ကျောင်းစာသင်ခုံ စတာတွေပေါ်မှာ ရေးခြစ်ပြီး စိတ်ကူး ပေါက် သလို ရုပ်ပြောင်ထားတဲ့ ပုံ၊ စာ စတာတွေကို ခေါ်ဆိုတာပါ။ Online မှာ Graffiti ရေးဆွဲလို့ ရပါတယ်။ Facebook မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Myspace မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးချင်ရာ ရေးခြစ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ မျှဝေ ခံစားဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ tool လေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။
5. Text twirl
စကားလုံးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ game တွေဟာ လူမှုရေး ကွန်ရက်ပေါ်မှာ ရှိနေပါတယ်။ ဆိုပါတော့ အဲဒီ game တွေကို ကစားရင်းနဲ့ ခက်ခဲတဲ့ level ရောက်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်လို့ ရတဲ့အတွက် ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ခံစားမှု ရရှိပါလိမ့်မယ်။ Text Twirl ဟာ facebook အတွက်ရော၊ myspace အတွက်ပါ ရှိနေပါတယ်။ Google ထဲမှာ “Text Twirl for facebook” ဆိုပြီး လိုက်ပြီး ရှာဖွေလိုက်တာနဲ့ သူရဲ့ link ကို တွေ့ရမှာပါ။
6. Bubble Town
Online ပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ဖြစ်စေ တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်စေ Video game ကစားချင်တဲ့အခါ bubble town ကိုသတိရလိုက်ပါ။ Puzzle game,flash game တွေနဲ့ တခြား ပေါ့ပါးသွက်လက်ပြီး အပျင်းပြေ ဆော့ကစားဖို့ ကောင်းတဲ့ game တွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ Bubble Town အတွက် Facebook မှာရော Myspace မှာပါ App နေရာ ရှိနေပါတယ်။
7. Buyboobuy and Product Pulse
Facebook ပေါ်မှာ Run တဲ့ buy boo buy နဲ့ Myspace အတွက် Product Pulse ကတော့ online shopping တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ တီရှပ်အနီလေး၊ အပြာလေး၊ လိုချင်ပြီ ဆိုပါတော့၊ user အနေနဲ့ ချက်ချင်း မဝယ်ခင်မှာ စိတ်ကြိုက် ပစ္စည်းကို detail ကြည့်ချင်ဦးမှာပါပဲ။ ဒီ tool နှစ်ခုကနေ စိတ်တိုင်းကျ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ဝယ်ယူရရှိ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
မြောက်မြားစွာသော လူတွေဟာ Facebook မှာရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ profile တွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပြသဖို့ အတွက် မြေပုံ လမ်းညွှန်မှုတွေ ပါဝင်တဲ့ App အငယ်စားတွေကို သုံးစွဲကြရပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ Dopplr ဟာ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ widget အဆင့် tool တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေကို အလွယ်ဆုံး ဆက်သွယ်နိုင်စေပြီး သူငယ်ချင်းတွေဟာ ဘယ်နေရာကနေ ချိတ်ဆက် နေတာလဲ ဆိုတာကိုပါ သိရှိစေနိုင်တဲ့အပြင် အခြားသော အသုံးဝင်တဲ့ tool တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
Mobile Service တစ်ခုဖြစ်တဲ့ google ရဲ့ အပိုင် twitter ဟာ (မြန်မာစကားမှာရှိတဲ့ တွတ်တီး တွတ်တာ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်) လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်ကိုယ်ရေဖျော်ဖြေမှုအနေနဲ့ mobile ကနေ တစ်ဆင့် blog ရေးသားနိုင်တဲ့ text message based မှာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ service တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
User တွေဟာ Social network မှာ ရှိမနေဘူးဆိုရင်တောင်မှ စာသား message တွေကို ဖုန်းတွေ ကနေ တစ်ဆင့် လက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။
10. Universal profile
Online ပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှ လူသားတွေအကုန်လုံး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်ရေး၊ အများနှင့်အတူ အေးချမ်း သာယာတဲ့ ဘဝလေးတစ်ခုကို ကိုယ်စီကိုယ်စီ တည်ဆောက် နိုင်ကြဖို့ နှိုးဆော် ဆော်သြ ကြတဲ့ အထဲမှာ Google, Myspace နဲ့ Facebook တို့ ပါဝင်လာခဲ့ကြပါပြီ။ Myspace ဟာ ဒီစီမံကိန်းကို အဖွဲ့ဝင် တွေ အချင်းချင်း profile တွေ လဲလှယ်နိုင်စေဖို့၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကူအညီနဲ့ အထောက် အပံ့ တွေ ပေးကမ်းဖို့၊ ebay, photo bucket, twitter yahoo နဲ့ digg စတဲ့ web တွေပေါ်မှာ ပြန့်ကျဲ နေ တဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို စုစည်းပြီး ကျစ်လျစ်တဲ့ web 2.0 ကမ္ဘာကြီး တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်စေဖို့ social network ဆယ်ခုကနေ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါ tool များကို အလိုရှိပါလျှင် google.com ပေါ်ရှိ Search box တွင် “လိုချင်သော tool နာမည် for myspace သို့မဟုတ် facebook” ဟူ၍ ထည့်သွင်းရှာဖွေပါ။
Posted by masterpieces at 4:06 AM
မြန်မာနိုင်ငံနက္ခတ်ဗေဒင်သင်တန်းကျောင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ခြေလျှင်နှင့်တောင်တက်အသင်း ယိမ်းနွဲ့ပါး ကွန်ပျူတာဗေဒသုခုမ Yangon Street Art Myanmar Books Catalogue (ဗေဒင်ပညာ) မြန်မာအင်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်းများ မြန်မာနိုင်ငံဝေဒသုတေသနအဖွဲ့ စင်္ကာပူတွင်အခွန်ဆောင်ရန် မြန်မာ အီးဘွတ်ခ် စာအုပ်များ မြန်မာနိုင်ငံဝေဒသုတေသနအဖွဲ့ ဇော်ဂျီမြန်မာဖောင့် Shwemingalar မြန်မာပိုင်အိုးနီးယား ၀ိညဉ်သစ်စာအုပ်စင် Book Hive Library
လောကအလှ ရွေအမြုတေ ရိုးမ-၃ ၀ိကလီးအလဲဗင်း ဧရာဝတီ ဈေးကွက် လျှပ်တပြတ် လူ့အခွင့်အရေးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ အာဖက်ဖ်အေ ခေတ်လူငယ် လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ မိုးသောက်ကြယ် ခေတ်ပြိုင် နေ့သစ် သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက် နိရဉ္စရာ မြန်မာ့အလင်း ယနေ့မြန်မာ ပလန်းနက် အင်တာနက်ဂျာနယ် People Magazine အိုးဝေ (စင်္ကာပူ) ပေါ်ပြူလာမြန်မာ ဒီဗွီဘီ တူဒေးမြန်မာ မြန်မာတိုင်း လောကအလှအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း ဖွဲ့တည်ရာ မီဒီယာ ရိုင်ရယ်လ်မြန်မာ မဇ္ဖိမ သာကီနွယ် မိုးမခ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် ရန်ကုန်တိုင်း သံလွင်အိမ်မက်
မန်မာရုပ်ရှင်ဗွီဒီယိုများ ရွှေအိမ်မက်မြန်မာဇာတ်လမ်းများ မြန်မာသီချင်းများ ဖရီးမြန်မာဗွီစီဒီ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်များ ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊ထိုင်ဝမ် ဇာတ်လမ်းများ မြန်မာ-နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများ မင်းသီလမြန်မာဗွီဒီယို ရွှေအိုးမြန်မာရုပ်ရှင် အာရှနိုင်ငံများမှ ဇာတ်လမ်းများ မြန်မာရုပ်ရှင်၊သီချင်းများ
နောင်တချိန်ကြရင် ကိုယ်လဲမိဘနေရာမှာ ရောက်ကြမှာ ကိုယ့်ရဲ့သားသမီတွေကို ဘယ်လို သွန်းသင် ဆုံးမ တတ်ရမလဲဆိုတာ သိလာကြမယ်
အဖော်ကောင်း မိတ်ဆွေကောင်း ဆိုတာ လူတွေရဲ့ဘ၀မှာ အဓိက အရာမှာပါတယ်လို့ကျနော် ထင်တယ် သူငယ်ချင်း တို့ လဲ သိကြမှာပါ အဖော်မကောင်းရင် မိတ်ဆွေမကောင်းရင် ကိုယ့်ဘ၀တွေတောင် ပျက်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ သူငယ်ချင်းတို့ လဲ ကိုယ်ကောင်းအောင် နေသရွေ့အဖော်ကောင်း မိတ်ဆွေကောင်းတွေ တွေ့ မှာပါ.... ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းဘို့ဆိုတာ.... ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်... ကိုယ့်ရဲ့ စရိုက်.. ကိုယ့်ကိုပိုင်... အချိန်ကိုသေချာ ဝေဖန်..သုံးသပ်ဘို့လိုတယ်ဆိုတာ.... သူငယ်ချင်းတို့ .. သိကြမှာပါ...
အာဇာနည် --- ရေမြေခြားထားသွားတော့
ဇော်ပိုင်ရဲ့ - ပန်ဆင်ဖို့ပန်းကလေး
ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ - ကြယ်တွေစုံတဲ့ည
we are under the same sun
RASU will open
စာအုပ်မျိုးစုံ - ၁
Free for all and all of myanmar peole. Simple theme. Theme images by luoman. Powered by Blogger.